ESI GOSIPỤTA AHỊHỊA NA DESKTỌỌPỤ NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Otu esi egosipụta igodo igwu na Windows 7 desktọọpụ
Eleghi anya onye ọ bụla n'ime anyị nwere ndị enyi na netwọk mmekọrịta. Mana ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume na ịchọrọ ịnweta ozi gbasara akụkọ ahụ site na onye ị na-agaghị agbakwunye ndị enyi gị. Ma ọ bụ ihe ịchọ mmasị gị na-achọghị ịhụ gị na ngwa ngwa gị. Kedu ihe a ga-eme na nke a?
Anyị debanyere onye ahụ na Odnoklassniki
Na Odnoklassniki, ị nwere ike ịdenye mmelite nke akaụntụ nke onye ọrụ ọ bụla, na ndepụta ozi na ibe gị ga-apụta nrịba ama gbasara akwụkwọ ya. Ihe kpatara ya bụ ikpebi abụọ: ma ọ bụrụ na emechila ihe onye ahụ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị nọ na "ndepụta nwa" ya.
Nzọụkwụ 1: Deba aha na onye ahụ na saịtị ahụ
Anyị buru ụzọ chọpụta otú ị ga-esi denye aha na onye na saịtị Odinoklassniki na netwọk mmekọrịta. Nsogbu ebe a agaghị ebili. Nzọụkwụ ole na ole dị mfe na ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Anyị na-aga na saịtị odnoklassniki.ru, anyị na-abanye na akaụntụ gị, na elu aka nri nke ibe anyị na-ahụ kọlụm "Chọọ".
Anyị na-achọta onye ọrụ maka akụkọ ahụ na anyị chọrọ ịdenye aha. Gaa na peeji ya.
Ugbu a, n'okpuru foto nke mmadụ, pịa bọtịnụ nwere oghere ntụpọ atọ ma họrọ na menu ndọpụta "Tinye na Ribbon".
Ka anyị hụ ihe anyị mere. Gaa taabụ "Ndị enyi" na na akuku aka ekpe họrọ ahịrị "Ndebanye aha". Ọ dị mma! Onye ọrụ a hoputara n'etiti ndị mmelite ị ga-enweta nzaba na Nri.
Oge ọ bụla, ịnwere ike ịkwụsị ndenye aha site na ịpịgharị òké n'elu foto onye ahụ, na ịpị obe n'ogo aka nri aka nri ma na-akwado "Wepu aha".
Usoro 2: Arịọ ka ịgbakwunye ndị enyi
E nwere ụzọ ọzọ ị ga - esi debanye aha onye ọ bụla Odnoklassniki. Ikwesiri izigara ya otu enyi. Ihe ịchọ ịmata ihe gị nwere ike ọ gaghị eme ka ọbụbụenyi dị mma, ma ị ka ga-anọgide na ndị debanyere aha ya.
Yiri Usoro 1 na akara "Chọọ" na-achọ onye ziri ezi ma gaa na ibe ya. N'okpuru foto ya, anyị na-agbanye "Tinye dị ka Enyi".
Ugbu a na oge niile, ruo mgbe onye ọrụ ahụ na-agbakwụnye gị ndị enyi ya, a ga-edebanye aha gị ka ịwelite akaụntụ ya. Lelee onye ahọrọ na ngalaba "Ndebanye aha".
Usoro 3: Deba aha na ngwa mkpanaka
Na ngwa mkpanaka maka gam akporo na iOS, ọ dịkwa ike ịdenye aha na otu onye. Mee ka o sie ike karịa na saịtị ahụ.
Gbaa ngwa ahụ, banye, na aka nri aka nri pịa akara ngosi ahụ "Chọọ".
Iji eriri "Chọọ" chọta onye ọrụ nke mere ka mmasị gị. Gaa na ibe nke onye a.
N'okpuru foto anyị na-ahụ bọtịnụ ukwu "Hazie ndebanye aha"nke anyị na-agbanye.
Na menu nke na-egosi na ngalaba "Tinye na teepu" Bugharịa ihe mmịfe ahụ gaa n'aka nri, gụnyere ọrụ a. Ugbu a ị ga-enweta akwụkwọ nke onye a na teepu gị. Ọ bụrụ na achọrọ, na kọlụm dị n'okpuru ebe a, ị nwere ike iji nyocha banyere ihe ọhụrụ maka onye ọrụ.
Dịka anyị hụworo, ọ dịghị ihe siri ike na usoro ịdebanye aha na onye ịchọrọ mmasị na Odnoklassniki. Ị nwere ike ịchọta ozi ọma ọbụna site na ndị a ma ama na ndị a ma ama, ndị na-eme egwuregwu, ndị na-eme egwuregwu. Isi ihe abụghị ichezọ eziokwu ochie: "Emela onwe gị arụsị." Ma mara mgbe ịkwụsị.
Hụkwa: Kpochapụ ngwa ahụ na "Ndị enyi" na Odnoklassniki
Disconnecting Internet on iPhone
Ịhazi onye nrụzi ZyXEL Keenetic 4G
Otu esi achọta ejima gị na foto ahụ
Anyị na-eburu vidio online
Ihe mere Microsoft Edge anaghị emeghe ibe
Ndị ọrụ PC dị elu maara nke ọma ọnọdụ ihuenyo dị mma na Windows. Otu analogue nke mgbawa a bụ na Android, karịsịa - na ngwaọrụ Samsung. N'ihi enweghị ncheta, onye ọrụ ahụ nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ na mberede, ma ọ maghi esi agbanye ya. Taa, anyị ga-enyere aka imeri nsogbu a. GụKwuo
AKVIS Magnifier 9.1
Esi ewepụ Nchọpụta Ihe na PC